အကယ်၍ သင် လုပ်ငန်းရင် တယောက် ဆိုရင်…(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » အကယ်၍ သင် လုပ်ငန်းရင် တယောက် ဆိုရင်…(၂)
အကယ်၍ သင် လုပ်ငန်းရင် တယောက် ဆိုရင်…(၂)
Posted by နွေဦး on Aug 31, 2011 in Business & Economics, Ideas & Plans | 13 comments
အရင် တင်လိုက် တဲ့ post မှာဝိုင်းဝန်း အကြံ ပေး ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ သူတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဝိုင်းပေးကြတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်တော့ အသုံးဝင်နိုင် တဲ့ အကြံ နှစ်မျိုးထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် ပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့ အစီစဉ်လေးကို ပြောကြည့်အုံးမယ်။ ရွာသူရွာသားများနဲ့ ပညာရှင်များ ဝေဖန် အကြံပေးကြပါအုံး။
ဈေးကွက် အနေအထားအရတော့ ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ဟာ ဈေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချတဲ့ price market ပါ။သူ့ထက်ငါ ဈေး လျှော့ရောင်းနေတော့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးက အများကြီး ကျသွားတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ အရည်သွေးယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ quality market ကို မျှော်ကြည့်လို့ မရနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီပေါ်မှာ မူတည်ပြီး စဉ်းစားထားတာပါ။
လက်ရှိ ကုန်ကြမ်းရောင်းတဲ့သူတွေ သူတို့ပစ္စည်း ရောင်းချင်ကြတယ်။အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ရောင်းသူက ဝယ်သူကို ဦးစားပေးပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာ သူ့ပစ္စည်းကို ပုံမှန်ဝယ်မယ်။ဒါပေမဲ့ ခါတိုင်းယူနေတဲ့ ပစ္စည်းထက် အရည်သွေးမြင့်တဲ့ ပစ္စည်းကို ယူပါမယ်။ဈေးကို ခါတိုင်းဈေးနဲ့ရနိုင်အောင် ပြောရမယ်။ရမယ်ဆိုရင် သူ့နဲ့ အဆင်ပြေမှာပေါ့။ မရနိုင်ဘူးဆိုရင် သူ့လို တခြား ရောင်းသူ တဦးဦးတော့ ရှိမယ်။ဝယ်သူ့ဈေးကွက် buyer market ဖြစ်နေတယ်လေ။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ဝယ်မဲ့သူရှိရင်လဲ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် ရောင်းရမဲ့ အခြေအနေလေ။အရပ်စကားနဲ့ဆို “ငွေပေါ်လျှော့ဈေး”ပေါ့။
အဲဒီတော့ ကိုယ်သုံးနေကြ ကုန်ကြမ်းထက် quality မြင့်တဲ့ ကုန်ကြမ်း ကို ပုံမှန်ဈေးနဲ့ ရပြီဆိုပါတော့။ဘာဆက်လုပ်မလဲ ..စက်ရုံကိစ္စ ကိုဆက်ရမှာပေါ့။
စက်ရုံမှာက လက်ရှိ ထွက်နေတဲ့နှုန်းကို ထိမ်းဖို့ ရှိတယ်။နေ့စဉ်ထွက်နေတဲ့ အရည်အတွက်ကို လျှော့ ချမှ ဂိုဒေါင်မှာ စုပုံလာတာကို ထိမ်းနိုင်မှာ။ဒီတော့ တနာရီမှာ ဆယ်ခု ထွက်တာကို ရှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ခြောက်ခုလောက် ထွက်ခိုင်းရမှာ။speed ကိုလျှော့ချ လိုက်တာနဲ့ အလုပ်သမားက idle ဖြစ်တော့မှာ။ ဒီကိစ္စ ကို QC (quality control) နဲ့ ပြန်သွားရမှာပါ။အလုပ်သမားတွေက ဒီရက်မှာ အလုပ်ထဲ မြဲနေတော့ ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီး ဖြစ်နေတယ်။
ဒီမှာ အလုပ်ဖြစ် ပြီ။ကုန်ကြမ်း အရည်အသွေး မြင့်မြင့် ကို သုံးပါတယ်။ကျွမ်းကျင်လုပ်သားနဲ့ ထုတ်လုပ်တယ်။ပစ္စည်း အရည်အသွေး မြင့်လာမယ်ဆိုတာ တွက်လို့ ရပါတယ်။Quality မြင့်လာ တဲ့ ကုန်ချောတွေရပြီဆို ဘာဆက်လုပ်မလဲ? ။ဈေးကွက်ကို ပြင်ဆင်ရမယ်။
ဈေးကွက်အတွက်တော့ ရွာထဲက မိတ်ဆွေတွေကို အားကိုးရမှာ..။လက်ရှိအနေအထားနဲ့ ဒီပစ္စည်းကို (ယေဘူယျပေါ့) ဈေးကွက်ထဲ ဘယ်လို ပို့မလဲ?..။အောက် မှာဖြေရှင်းရမှာလေးတွေ မေးထားပါတယ် ။အဖြေရှာပေးကြပါ။
၁။ ။ယခုပစ္စည်းကို ယခင် တံဆိပ်(သို့)ဘူး ပါကင် နဲ့ဘဲ ဆက်သုံးရမလား?
၂။ ။sub title မှာ အထူးထုတ်(သို့)စပါယ်ရှယ် (သို့) အခြားတခုခု ထဲ့ သင့်လား?
၃။ ။ဈေးနှုန်းကို (က)မြှင့်ရောင်းသင့်လား?
ဒါဆိုဈေးကွက် ပြောင်းသွားနိုင်လား?။မူလပစ္စည်းရဲ့ အခြေအနေ ဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ?
ကဲ…. အခုကစပြီး ကျွန်တော် အလုပ်များသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကြမ်းဝယ်တဲ့ဆီက စရတော့မယ်။ကျန်တာလေးတွေ ရွာထဲက မိတ်ဆွေများ စဉ်းစားဝေဖန် အကြံပြုကြပါ။ရံဖန်ရံခါ on lineပေါ် ရောက်ရင် မိတ်ဆွေများရဲ့ အကြံပြုချက်များကို ဝင်ဖတ်ပါမယ်။
အကုန်လုံးကို အလကားဝေငှလိုက်တာပို အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲရှုံးတယ်အော်ပါတယ်။ပြည်သူကလဲငတ်နေပါတယ်။
ဟိ ဟိ စိတ်မဆိုးကြေးပါ
အဖေကတော့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်.. သူဋ္ဌေးဖြစ်ချင်ရင် သူဋ္ဌေးလိုတွေးပါတဲ့… အလုပ်သမားလိုတွေးရင် အလုပ်သမားဘဲ ဖြစ်မယ်တဲ့…
ကျွန်တော်က ရွာထဲက မိတ်ဆွေတွေကို လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်စေချင်လို့ ဒီလို တွေးစေချင်တာပါ…
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို လျှော့ချလိုက်ပေမယ့် ၀န်ထမ်းအရေအတွက်မလျှော့ချဘူးဆိုတဲ့သဘောလား
ဂိုဒေါင်ထဲမှာ စုပုံနေမှုလျော့သွားနိုင်ပေမယ့် ၀န်ထမ်းလစာကတော့ မလျော့တော့ ငွေတော့ပိုရှာရမှာပဲ
ပါကင်ကွာလတီလျော့သွားရင် ကုန်ပစ္စည်းကွာလတီမှာ တိုးဖို့ပိုအဆင်ပြေမယ်
sub titleမှာတော့ ဘာမှမထည့်ချင်ဘူး ဈေးနှုန်းပြောင်းရောင်းရင်တော့ ထည့်မယ် (မြှင့်ရင်)
မဟုတ်ရင် အရင်ကုန်ပစ္စည်းတွေ မရောင်းရတော့ဘဲ ကျန်နေမှာစိုးလို့
ဈေးနှုန်းကိစ္စကတော့ မြင့်သွားရင် ၀ယ်သူငြိုငြင်နိုင်တယ်
ပိုကောင်းတာကအသာထား မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ ဈေးချိုတာမက်တာပဲ
“ထုတ်ပိုးမှုပုံစံအသစ်ဖြင့် ယခင်ဈေးနှုန်းအတိုင်း” ဘာညာပေ့ါ
ကျုပ်တို့ တော့ ဈေးပေါရင် အရင်သုံးကြည့်တယ်
Quality ကောင်းတယ် ဆို အစဉ်သုံးတယ်..
အဲလို ဈေးပေါ..အရည်အသွေးကောင်းလို့ အစဉ်သုံးနေရင်းက တဖြည်းဖြည်း ဈေးနဲနဲချင်းစီတက်သွားတာ သတိထားမိတယ်..
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အင်တာနက်ဆိုင် စ.ဖွင့်တယ်..
နာမည်ရှိပြီးသား၊မိတ်ရှိပြီးသား နှစ်ဆိုင်ကြားထဲကို ရောက်နေတယ်..
ဈေးကို ထက်ဝက်ရှော့ပေးတယ်…ဘယ်နနာရီသုံးရင် ဘယ်နနာရီ ထပ်ဆောင်းပေးတယ်..
ဒါပေမဲ့…ဆိုင်ရှင်ဘက်က Services ကောင်းကောင်းထပ်မြှင့်မယ်..လက်ရှိမိတ်တွေကိုလဲ ထိန်းထား
နိုင်မယ်ဆို..တဖြည်းဖြည်း ဈေးတင်သွားလို့ ရဘီဗျ
ဥပမာ..စီးကရက် တံစိပ် အသစ်က နာမည်ရှိပြီးသား Brand တွေကို ဒီနည်းနဲ့Fight ပြီး ဈေးကွက်ယူသွားတာတွေ..Ruby လို ဟာမျိုးပေါ့
အချိုရည်ထဲမှာဆို Max အအေးဗူး လေးတွေလို ပေါ့
ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေးဆိုလို့ကွမ်းယာတောင် မလုပ်ဖူးသေးပါဘူး
(နော့ ဆိုတာကတော့ သူကြီးလေသံပါ )
ဈေးကွက်ဆိုတာ ရောင်းအားနဲ့ဝယ်အားတို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုလို့မြင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာ ရောင်းသူဟာ ရောင်းကောင်းဖို့အတွက် ၀ယ်သူရဲ့လိုအပ်ချက် နဲ့ အကြိုက် ကို သိဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ -ဈေးကွက်ထဲမှာ ဈေးပေါပေါပစ္စည်းထုတ်ရင် ရောင်းအားတက်လား ၊ Quality ကောင်းကောင်ထုတ်၇င်ေ၇ာင်းအားတက်လားဆိုတာသိဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ ဈေးပေါတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ ကြာရင် ရောင်းအားကျသွားတတ်ပါတယ်။ ၀ယ်သူတွေရဲ့တုန့်ပြန်မှု ကိုကြည့်ပြီး လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ idle ဖြစ်နေရင်တော့ ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်ဖို့ထက် ဂျောင်ထိုးအိပ်နေပြီ လူပျင်းတွေလည်း တခါတရံဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
sai nyi nyi says:
ကျွန်တော့် တစ်ဦးတည်းရဲ့ အမြင်နဲ့ သဘောထားလေး ပြောပါရစေ။ ၁) ပါကင်ပုံစံကို မူကွဲဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းပြီး တံဆိပ်(logo)ကိုတော့ မပြောင်းပါဘူး။ ၂) ထုတ်လုပ်မှု (ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှု၊ ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှု) အဆင့်တိုင်းမှာ အထူးဂရုတစိုက်နဲ့ စပါယ်ရှယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားကြောင်း သိသာအောင် ရေးသားဖေါ်ပြကြော်ငြာမယ်။ ၃) အဆင့်တစ်နဲ့နှစ်ကို လုပ်ရင် ပစ္စည်းဟောင်းထက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချမှုကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်မယ်။ လက်ရှိလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဒါမျိုးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ ကျွန်တော် သုံးသပ်မိပါတယ်။ ဥပမာ …အချို့ အချိုရည်ကုမ္မဏီတွေ စက်ရုံတစ်ခုထဲက အတူတူထုတ်ပေမဲ့ အချိုရည်ကို နာမည်အမျိုးမျိုးပေးပြီး ဈေးကွက်မှာဖြန့်ဖြူးကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဈေးနှုန်းမတူအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်၊ ဈေးကွက်မှာ အချိုရည်တခုခု ပြဿနာတက်ခဲ့သည်ရှိသော် အခြားအမည်မတူ အချိုရည်အားဖြင့် ကုမ္မဏီဆက်လက် လည်ပတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ထဲမှာ လက်ဖက်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ နာမည်ကြီး လုပ်ငန်းတစ်ခု ထိခိုက်သွားတာ သတိထားမိမယ် ထင်ပါတယ်။ အခု အဲဒီလုပ်ငန်းရှင်က အဲဒီလုပ်ငန်းကိုပဲ အမည်သစ်တမျိုးနဲ့ ဈေးကွက်မှာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့ပစ္စည်းရဲ့အရသာက အဟောင်းထက် ပိုကောင်းတယ် ကျွန်တော့် တစ်ဦးတည်းရဲ့ အမြင်နဲ့ သဘောထားလေးပါ၊ ပညာရှင်တွေ ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူတွေရဲ့ ပြန်ဝေဌကြတာကို စောင့်မျှော်လျက်
2) မတူကွဲပြားသည့်အတွက် အထူး/စပါယ်ရှယ် ခြားနားတဲ့စကားလုံးသုံးမည်၊(မိမိထုတ်ကုန်မှာထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးရှိရမည်)
3) ဈေးနှုန်းကတော့ မြှင့်ရောင်းမှာပေါ့။
4) စားသုံးသူက သူကြိုက်ရာကို ရွေးချယ်လိမ့်မည်၊
ဦးလေးကတော့ ဦးနှောက်တော့ စားနေပြီ။
အလုပ်သမားတွေ ပျင်းရိသွားရင် အရင်လို ပြန်မဖြစ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ အရင်လို အလုပ်ပြန်ကျလာတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ တက်တက်ကြွကြွ မလုပ်ချင်တော့ပဲ ခိုကပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ကို ပုံမှန် လုပ်ပြီး အလုပ်ချိန်ကို ယာယီ လျော့ချ တဲ့ အတိအလင်း စာထုတ်တာ ပိုကောင်းမလားတွေးမိတယ်။ နောက်အလုပ်ပြန် များတဲ့အခါ မညူစူတော့တောမျိုး.. အလုပ်မကောင်းတဲ့ အလုပ်ရှင်ကောင်းတွေကို အလုပ်သမားများက မေတ္တာပို့ပြီး အလုပ်ကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းနေကြမလား။
ရောင်းကုန်သမားတွေက အတင်းလာရောင်းတဲ့ အခါ ကွာလာတီ မြှင့်ခိုင်းတာ ကောင်းပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း ရောင်းတဲ့ လူတွေက သူတို့ ထုတ်တာ မဟုတ်ဘူး တဖက်နိုင်ငံက ခိုးဂျောင် ခိုးဝှက် သယ်ရတယ် ဒါတောင် မနည်း ဈေးလျော့ပေးရတာ.. ကွာလတီ က သူတဦးတည်း ၀ယ်တာ မဟုတ်တော့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပြောလို့ မရဘူး ငိုပြလာရင်… သူတို့ပြောတာ ကို လွန်ဆန်ပြောဖို့ မဖြစ်နိင်ဘူး ထင်တယ်။ ထွက်သမျှ ကုန်ကြမ်း ကိုယ်က အကုန် မဖြုန်းနိုင်တော့ လေသံ မမာနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပေါ့။
ဂိုထောင်မှာ စုပုံနေတဲ့ ပစ္စည်းများကို လက်တွေ့ ကွင်းဆင်းတာ ကောင်းပါတယ်။
ပစ္စည်းတခု ရောင်းအားက ဈေးသည် ပါးစပ်နဲ့လည်း ဆိုင်တယ်..
ဒါလေးကောင်းတယ်.. တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း ရောင်းတာမျိုးပေါ့။
ဘာဝယ်ရမလဲ တွေဝေနေတဲ့ လူဆိုရင်လည်း ပိုပိုသာသာ ထိုးရောင်းရင်း နောက်တော့ ကြိုက်သွားတာ ရှိမယ်။ အဲဒီတော့.. နယ်ကိုယ်စားလှယ် လက်ခွဲတွေကိုလည်း မေ့လို့ မရပါဘူး။ ဖြုန်းအား ဘယ်လောက် ရှိရင် ဘယ်လောက် ပေးမယ် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ချက် တခုပေးလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။
၀ယ်သူကို တိုက်ရိုက်ပစ္စည်းလျော့ပေးတာ ကိုယ့်အပိုင်းက လူအား ငွေအားနဲ့ ကွင်းဆင်းနိုင်ရင် အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆေးလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကြားဖူးတာ တခု ရှိတယ်။
အသိလင်မယား နှစ်ယောက်ဆို ဆေးရောင်းတယ် သူတို့ဆိုင်က အမြဲ ဖြုန်းအားကောင်းတဲ့ အထဲမှာ ပါတဲ့ အတွက် ကိုရီးယားကို နှစ်စဉ် သွားဖို့ လက်မှတ်ရတယ်။ မသွားရင်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး ပိုက်ဆံ ရတယ် သူတို့ အတွက် အခွင့်အလန်းပေးတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့။ နှစ်ပတ်လည်မှာ ဖြုန်းအားကောင်းတဲ့ မန်ဘာတွေကို ပျော်ပွဲရွင်ပွဲ လုပ်ပေးပြီး ဘောနပ်စ် ပေးတာမျိုး.. ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စည်းကို မမေ့သွားအောင် ဆွဲဆောင်နည်း တမျိုးပေါ့။
ပစ္စည်းတံဆိပ်က နာမည် ပျက်နေပြီ ဆိုရင်တော့ နာမည် ပြောင်းထုတ်သင့်တယ်။
နာမည်က ပုံမှန်ပဲ ပစ္စည်းတွေ ထွက်အား များချင်လို့ ဈေးကွက် မှာ နေရာ များများ လိုချင်လို့ ဆိုရင်တော့.. နာမည် ခွဲထုတ်ပါ.. ကွာလတီ ကို မသိမသာ ခွဲထားသင့်တယ်။ ဥပမာ စူပါကော်ဖီ ၁၀၀ ကင်းကော်ဖီ ၅၀ ထိုကဲ့သို့ တွေးမိပါတယ်။
ပစ္စည်း အရောင်းအ၀ယ်ကလည်း တခါတရံ ကံနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ စူပါမားကတ်မှာ ပစ္စည်းတွေ အများကြီး တံဆိပ်တွေ အများကြီး ရှိပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ပစ္စည်း တခုတည်း ၀ယ်မယ် ဆိုရင်တော့ အများကြီးထဲက တခုကို ရွေးမှာပါပဲ..
အလုပ်ချင်းတူပေမဲ့ အကျိုးပေး မတူတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ရွှေအိုးမြုပ်ထားမှ ရွှေတူးလို့ ရမှာပါ.. ရွှေအိုးမရှိပဲ တူးနေရင် မောတာပဲ အဖတ်တင်တတ်ပါတယ်။
အကျိုးမပေးတဲ့ အလုပ်ကို ခြေစုံမြုပ်ပြီး လုပ်မိနေရင်လည်း အဆုပ်ဘက်ကို သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သေချာ သုံးသပ်ပြီး လုပ်ငန်း ပြောင်းသင့်ရင်လည်း ပြောင်းသင့်ပါတယ်။
ယာယီ အခိုက်အတန့် ပြသနာတွေ ကတော့ ခဏဆိုရင် ပြေလည် သွားပြီမို့.. အားတင်းထားပါ။
လိုရင် လိုသလို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းကလည်း ပညာရပ်တခုဖြစ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
အခုကတော့ တွေးတတ်သလို တွေးလိုက်တာပါပဲ။
မှားတာ မှန်တာတော့ မသိဘူး။
ကုန်ပစ္စည်းက ကိုယ်လိမ်းပေါင်ဒါ ဆိုရင် ဘာမှအပင်ပန်းခံပြီးလုပ်မနေနဲ့….. နဂိုအတိုင်းရှိမြဲအတိုင်းသာဆက်လုပ် .. အဲဒါပေမယ့် ပေါင်ဒါကျမယ့် အပေါက်တွေကို ကြီးပြီးဖောက်ပေးလိုက်… မြန်မြန်ကုန်၊ မကြာမကြာဝယ်… ဒီဈေးနဲ့ ခဏခဏရောင်းပေါ့ကွယ်
ဈေးကွက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုအသာစီး(competitive advantage) ရဖို့ဆိုရင်
(၁) cost-leadership (ဈေးနူန်းသက်သာမှု)
(၂) differentiation (သူများထက်ထူးခြားတဲ့အချက်)
(၃) cost-leadership with differentiation ဆိုတဲ့ဈေးနူန်းလည်းသက်သာမယ်
Harumoto ရဲ့ product ကိုသုံးစွဲတဲ့ customer တွေကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာကို
ကို analysis လုပ်ပါ။သူတို့ကကိုယ့် product အပေါ်မှာအမြင်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်ဈေးနူန်းနဲ့ပြိုင်ပါ။
သူတို့ကကိုယ့် product အပေါ်မှာအမြင်မကောင်းဘူးဆိုရင်..မကြိုက်ဘူးဆိုရင်
product/Service မှာ industry standard ဆိုတာရှိပါတယ်။
city mart မှာဈေးဝယ်တဲ့ဆိုပါဆို့။ ကိုယ်မျော်လင့်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုက(expected service) က
အခြား center တွေမှာလည်းဒီဝန်ဆောင်မှုသုံးခုကိုပေးရင်အဲဒါက retail business တစ်ခုလုံးရဲ့ industry standard ပါ။ဒါပေမယ့် city mart က(၁)မိုးရွာရင်ထီးလာမိုးပေးတယ်၊(၂) ပစ္စည်းများရင်လိုက်ပြီးတော့သယ်ပေးတယ်(၂) ၀န်ထမ်းကိုမုန့်ဖိုးပေးရင်မယူဘူး
စတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထပ်ဆောင်းပေးတယ်ပါကအဲဒါကို industry standard အပြင်ထပ်ပေါင်းပေးတဲ့ကိုင်တွယ်လို့မရပဲခံစားလို့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူး (non-tangible benefits)
ကို augmented product လို့ခေါ်ပါတယ်။
Harumoto ရဲ့ product ကို industry standard အပြင်ထပ်ပေါင်းပေးနိုင်မယ့် augmented product ကို
အဲဒီဝန်ထမ်းက (၁) Marketing, Branding နဲ့ customer relationship နဲ့ customer service အကြောင်းသိရှိနားလည်သူ (၂) Strategic Management (မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲမှု) အကြောင်းလေ့လာသိရှိနားလည်သူကိုရွေးချယ်ပါ။
(သို့မဟုတ်) အတွေ့အကြုံရင့်သော၊ပညာတတ်သော အတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်ကိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ခန့်လိုက်ပါ။
Harumoto ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲဗျ။ ဂျပန်ကာတွန်းကားထဲက ဇာတ်ကောင်အမည်ထင်တယ်..။
ပို့စ်အရ လုပ်ငန်းသည် အလုပ်ပါးပြီး ဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်တဲ့ ဝယ်သူဈေးကွက် ဖြစ်တယ်လို့ ပါတယ်နော်။ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ကုန်ကြမ်းသုံးလို့ ပိုကောင်းတဲ့ ကုန်ချောထွက်ရမယ်။ နောက်ပြီးစာအရ လက်ရှိမှာ စက်ရုံထွက်ပစ္စည်းကို အရည်အသွေးအဆင့် တမျိုးထဲ ထုတ်နေတယ်လို့ နားလည်ထားတယ်။
၁။ ယခုပစ္စည်းကို ယခင် တံဆိပ်(သို့)ဘူး ပါကင် နဲ့ဘဲ ဆက်သုံးရမလား?
လက်ရှိတံဆိပ်ကိုပဲသုံးပါ။ အဆင့်အတန်းမှီ packaging နဲ့သုံးပါ။ (အရည်အသွေး တမျိုးထဲသာ ထုတ်မည်ဟုယူဆလျင်)
အထူးထုတ်၊ စပယ်ရှယ်ဆိုတာထက် ပိုမိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော နည်းပညာ၊ ကုန်ကြမ်းတို့ဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံထားကြောင်း၊ မကျေနပ်လျင် ငွေပြန်အမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါ။ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ သိသာမြင်သာပါစေ။ ဥပမာ – သက်တမ်းကုန်နေ့စွဲ၊ ကုန်ကြမ်းအမျိုးအမည်၊ နည်းပညာအသစ် စသည်တိုအား ဗူးအခွံပြင်ပတွင် ပက်ကင်ဗူးနှင့် လိုက်ဖက်စွာ ညွှန်းပြပါ။ ပက်ကင်ဗူး အထဲတွင်လည်း အသုံးပြုပုံ ပညာပေးစာရွက်လိုမျိုး၊ မိမိပစ္စည်းအကြောင်း ကြော်ငြာထည့်နိုင်သည်။
ပုံမှန်ဈေးနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ ကုန်ကြမ်းရထားလို့ အလောတကြီး ဈေးမြင့်ရန် မလိုပါ။
အတူတူ ထားရောင်းပါ၊ ရေရှည်တွင် ဝယ်လိုအား ကောင်းလာလျင် ကံစမ်းမဲလိုမျိုးဖြင့် ဈေးနှုန်းကစားယူပါ။
နှစ်ဗူးဝယ်လျင် နောက်တဗူးကို တဝက်ဈေးနှုန်းလို လျော့ဈေးချတာ အကျိုးများမည် ထင်လျင် စမ်းနိုင်သည်။ ပစ္စည်းအများအပြားဝယ်အောင် ဈေးလျော့ခြင်းသည် သာမန်အားဖြင့် ရောင်းသူအကြား ဈေးနှုန်းစစ်ပွဲသို့ ဦးတည်စေနိုင်၍ သတိထာပြီး လုပ်သင့်သည်။ ပိုမိုသင့်တော်သည့်နည်းလမ်းမှာ ဈေးလျော့ခြင်းထက် လျော့လိုက်မည့်တန်ဖိုးအတိုင်း ၁၅%၊ ၂၅% ပိုပေးခြင်း၊ ယင်းသို့ပိုပေးခြင်းကိုလည် သိသာမြင်သာအောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဈေးမတက်ဘဲ အရည်အသွေးမြှင့်သွားရင် ရောင်းအားတက်မှာ သေချာပေါက်ပဲ။ ပြသနာက အဲဒီကုန်ကြမ်းကို ပုံမှန်ဈေးနဲ့ အမြဲရနိုင်မလားဆိုတာ။ အမြဲရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တယောက်ထဲ လက်ဝါးကြီး အုပ်သိမ်းဝယ်မရလို့ ပြိုင်ဖက်တွေလည်း လိုက်ပြောင်းမှာပဲ။ အဲသလိုဆို ကိုယ်ကရတုန်းအခိုက် first mover advantage ကို မလွတ်တန်း အသုံးချပါ။ သူများတွေလိုက်လာရင် ပရိုမိုးရှင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရေးပညာတွေနဲ့ ခေါင်းတလုံးပိုမြင့်ပါ။ (အရည်အသွေး တမျိုးတစားထဲထုတ်ခြင်း)
တခါတလေမို့ရတာ၊ နောက်ပိုင်းဈေးတက်မယ်၊ ရောင်းသူတိုင်း လိုက်မသုံးနိုင်ဆိုရင် ပရီမီယံကွာလတီအဖြစ် လက်ရှိတံဆိပ်နဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ဝယ်သူတိုင်းသိမဲ့ ညီအမတံဆိပ် အနေနဲ့ထုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းသည် တံဆိပ်နှစ်ခုစလုံးနဲ့ ကိုက်ညီဖို့လည်းလိုပါတယ်။ (အရည်အသွေး နှစ်မျိုး) နို့မို့ဆို ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအသစ်၊ စက်အသစ်၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အသစ်ထပ်ဆင်ရမှာမို့ လက်ရှိအချိန်မှာ မကိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
အပိုပြောချင်တာ စာထဲပါ စက်လည်နှုန်းလျော့ပြီး ထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက်ထိန်းမဲ့အစား အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေအောင် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပုံစံ၊ စက် လူ နေရာချထားမှု၊ စက် ကြံခိုင်ရေး၊ သိုလှောင်ပုံ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ် စတာတွေကို စာတွေ့လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်ပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲကြည့်ပါ။ သာမန်အချိန်ဆို ရောင်းလိုအားနောက် ထုတ်လုပ်ရေးက လိုက်နေရလို့ လိုအပ်နေတောင် စက်ရပ်ပြီး ဟိုကလိ ဒီကလိလုပ်၊ manufacturing assembly line နားပြီး ဟိုပြောင်းဒီရွှေ့လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘုရားပေးတဲ့ အချိန်လို့ သဘောထားပြီး ပြန်ကောင်းလာမဲ့ အချိန်အတွက် ပြင်ဆင်ပါ။ (ဘောလုံးကလပ်တွေ နားတဲ့ရာသီမှာ ဘောလုံးသမားတွေအားမွေး၊ နည်းဗျူဟာအသစ်တွေချမှတ်၊ လူသစ်လူဟောင်း အပြောင်းအရွှေ့လုပ်သလိုပေါ့ဗျာ)။
စာကြွင်း။ မှတ်ချက်ရေးသူ ဦးကြောင်သည် မားကတ်တင်း ပါရဂူဘွဲ့ရ ဒေါက်တာတဦးဖြစ်ပြီး အမေရိကန် နာဆာအာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့အား ငွေကြေးအခက်အခဲပြေလည်စေရန် ရပ်ဆိုင်းထားရသော ၎င်းတို့၏ အာကာသလွန်းပျံယာဉ်များကို မြန်မာပြည်တွင် တရုပ်ပြည်လုပ် အဲယားကွန်းဘတ်စ်ကားများနှင့်အပြိုင် ပြေးဆွဲရန် အကြံပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ :neutral: